Iindaba - 2020.7.9
Sithatha "ukuyila imfashini, ukwenza ngokwezifiso i-sexy" njengenjongo yeshishini, ukwenza ifashoni yokutsala kunye nokuvumela iqonga linxibe ngokungakhathali.
Umthombo wemithombo yolwazi
Umdibaniso wamashishini kunye norhwebo B2B
Abavelisi abomeleleyo, intsebenziswano yehlabathi
Ukuhanjiswa komnqamlezo, ukuthunyelwa kwehlabathi (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX)
Ukwenza ipleyiti yekhompyuter, uyilo lwantlandlolo,
Ukusika ibhedi yekhompyuter, ukuhlolwa kwemveliso esemgangathweni kunye nokuhanjiswa, iziko lenkonzo yabathengi
1.Uphuhliso lwezixhobo, uyilo lwe-CAD, imveliso, ukuthengisa, ishishini kunye nemowudi yokudityaniswa korhwebo, umgangatho onokulawulwa, ukuqinisekisa ukusebenza kwemveliso kunye nokusebenza ngokukuko;
2. Inkqubo yokwenza ipleyiti ye-CAD ekrelekrele, inkqubo yomnini yokuzenzela eyakhekileyo ekwenzileyo eneminyaka eli-10 yamava ngokwezifiso iphucula kakhulu ukusebenza ngokwezifiso kunye nokuchaneka kwesayizi;
3.Yenza ulwenziwo lwesiqwenga esinye, isantya sonikezelo esikhawulezayo ngaphakathi kweeyure ezingama-24, idatha elungiselelwe abathengi inokugcinwa kangangeminyaka emi-3;
4. Sinokubonelela ngeempahla ezikhethekileyo zesitayile kubathengi abakhulu ukuqinisekisa ukhuphiswano lweemveliso;
5. Eyona mveliso iphambili iphandwe ngokuzimeleyo kwaye yaphuhliswa. Ilaphu linqabile, lahlukile kwaye linobuhlobo kwindalo.
3.our ilaphu eyodwa
Emva kwemizamo yethu eqhubekayo, umthamo wentengiso yeethpandex zethayithi zethu ezithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaseYurophu naseMelika idlule kwi-US $ 1 yezigidi. Olu luphumeleleyo olutsha kwimbali yethu yokuthengisa. Siza kuqhubeka nokwandisa nokuphucula iimveliso zethu ukuze iimveliso zethu zithandwe ngakumbi. Siqeshe umyili omtsha oza kusizisela iindlela ezingcono nezithandwayo. Iimveliso zethu zigqitywe ngokuzimeleyo kwilaphu ukuyila, ukuvelisa kunye nokuthengisa. Oku kusivumela ukuba silawule ngcono umgangatho wemveliso, silungelelanise imveliso ngexesha elifanelekileyo, sive ingxelo yabathengi okokuqala, kwaye siqhubeke siphucula iinkonzo zethu zemveliso. Iimveliso zethu zinegama elihle ekhaya nakwamanye amazwe, kwaye ukuthengiswa kwamaqonga amaninzi ekhaya nakwamanye amazwe kuyanda ngokuthe chu. Abathengi bethu babandakanya abathanda iimpahla zekati, kunye neearhente zasekhaya nezangaphandle kunye neevenkile. Baye bagcina ukuthengisa okuhle. Sinethemba lokuba abathengi abaninzi kunye nabathengisi beearhente baya kukhetha iimveliso zethu. Sinqwenela ukuba iimveliso zethu zingathengiswa kwikona nganye yehlabathi.
Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yamava, siye ngokuzimeleyo yavelisa uguqulelo ekrelekrele ezikrelekrele kwinkqubo yokwenza ipleyiti CAD. Yisoftware yokwenza ingubo yokwenza icwecwe lekhompyuter, ukufaka iikhowudi kunye nokubekwa. Yinkqubo entsha ye-CAD yengubo entsha negcweleyo. Le nkqubo ikulungele ngakumbi uyilo kunye nokwenza ngokwezifiso iimpahla zethu ezizodwa. Ngokukrelekrele yenza ukusika idatha ebunjiweyo, kwaye idatha ichanekile ngakumbi, esinceda ukuba senze iimpahla ezifanelekileyo ngakumbi ezenzelwe abathengi. Impahla yethu yahlukile kwimpahla eqhelekileyo. Ifuna abayili abakhethekileyo ukuba bayile, amalaphu akhethekileyo esiko, iinkqubo ezizodwa zokwenza ipleyiti kunye neenkqubo zokusika, kunye nabaguquli abanobuchule bokusebenza. Ukusukela imfezeko yeyona njongo yethu yanaphakade. Ikati yethu ngumzimba opheleleyo odibeneyo, noyilo olungenamthungo. Ingena kakuhle esinqeni kwaye igudile kakhulu. Akukho mkhondo weefold ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Oku kubulela kwizixhobo zethu zobungcali kunye nabaqulunqi abaziingcali kunye nabathungi abaziingcali. Kukwakho nomcebisi wempahla ozinikeleyo oza kukunceda. Logama nje ubuza iimfuno zakho, sinokukunika impahla oyifunayo.
Okwangoku, ngenxa yokuqhambuka kwee-coronaviruses ezintsha e-China nakwilizwe jikelele, inkampani yethu ikhathazekile kakhulu yile. Ngokusekwe kwiminyaka yethu emininzi yamava kwimveliso yempahla yomzimba kunye neendidi ezahlukeneyo zesinxibo, sivule imigca emibini yemveliso yeesuti zokukhusela ezingenazintsholongwane kunye neemaski. Isuti yethu yokukhusela yenziwe ngefilimu e-PE ephefumlayo kunye nezinto ezingalukwanga. Isuti yokuzikhusela yomzimba opheleleyo eneziphu zangaphambili kunye nehood. Iza ngobukhulu obahlukeneyo kwaye inokungangeni manzi, ingabi nothuli, kwaye inganyangeki kwintsholongwane. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zokhuselo lwemihla ngemihla. Iimaski zethu zahlukile kwimaski eziqhelekileyo ezilahlwayo kwaye zahlukile kwimaski zeKN95. Iyazishiya iintsilelo zeemaski zesiko. Uyilo lwethu lwemaski lusefashonini, ngezinto ezimnyama kunye ezimhlophe ze-gingham, ilaphu elimnyama elicocekileyo, kunye nesikhumba esimnyama se-PU. Kufanelekile ukunxiba komzali nomntwana, kwaye inokusetyenziswa ngabantu abadala kunye nabantwana. Inephepha lokucoca ulwelo elakhelwe-ngaphakathi elinokucocwa rhoqo kwaye lisetyenziswe. Yomelele kwaye ayinakhubazeka, isindisa amandla kwaye inobuhlobo kwindalo, icocekile kwaye isempilweni, intofontofo kwaye intle. Ukuba uyathanda, ungathenga kwiwebhusayithi yethu, kwaye wamkele abathengisi basekhaya nakwamanye amazwe ukuba beze kuthethathethana ngokuthenga.